Al Shabaab: Waxaan Gacanta Ku Dhignay Diyaarad Drone Ah Oo Ay Kaamerrado Ku Xidhan Yihiin | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Al Shabaab: Waxaan Gacanta Ku Dhignay Diyaarad Drone Ah Oo Ay Kaamerrado Ku Xidhan Yihiin
Xarakada Al-shabaab ayaa sheegay in ay Gacanta ku dhigeen Diyaarad kuwa aan Duuliyaha lahayn ah oo ay ku Rakiban yihiin Kaamirooyinka wax lagu basaaso, taasoo shalay gellinki dambe ku soo dhacday deegaan 45-km Galbeed kaga beegan Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Diyaaradan oo ahayd nooca Drones-ka loo yaqaano ee Mareykanku leeyahay ayaanu weli Mareykanku ka hadlin, iyadoo inta badan Mareykanku uu duqeyn uu u adeegsanayo diyaaradahan ka geysto deegaannada ay gacanta ku hayso Al-shabaab ee badhtamaha iyo Koonfurta Soomaaliya.
Sidoo kale, Al-shabaab ayaa warar ay ku baahisay baraheeda Internet-ka ku sheegtay in in diyaaradani ay soo dhacday xilli ay ku guda jirtay Hawl-gallo basaasid ah.
Al-shabaab intaas ku dartay in diyaaradda loo qaaday goob aan la garanayn, sidoo kalena waa markii ugu horreysay oo Al-shabaab ay sheegto inay gacan ku dhintay diyaarad Drone ah oo ay kaamirooyin ku rakiban yihiin.
Dhanka kale, Deegaanka ay diyaaraddani kusoo dhacday oo lagu magacaabo Qudus ayaa shacabka ku nool waxay sheegeen aanay burbur xooggan soo gaadhin diyaaraddan Drone-ka ah.
Mareykanka ayaa saldhigyo Qarsoodi ah ku leh qaar ka mid ah deegaannada Soomaalida, kuwaasoo ay ka abaabusho duqeynta ay inta badan ka geysto gudaha Soomaaliya.